သငျသညျအဆုံးမဲ့ scrolling နှင့်ဗီဒီယို autoplay မှနှုတ်ဆက်နီးပါးနိုင်ပါတယ်။ | Androidsis
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အဆုံးမဲ့ scrolling လုပ်ခြင်းနှင့် autoplay သေဆုံးနိုင်သည်
ဒါဟာကြောင်းကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်သွားမယ့်, လူမှုရေးကွန်ရက်တွေမှာသုံးနေတဲ့အဆုံးမဲ့စာလိပ် လူကြိုက်အများဆုံးလူတွေကဒါကိုအကန့်အသတ်ရှိအောင်ကွယ်လွန်သွားနိုင်တယ်။
ငါတို့စူးစမ်းလေ့လာတဲ့အခါ ငါတို့ Facebook အကောင့်ရဲ့နံရံကိုငါတို့ဆက်သုံးနိုင်သည်တကယ်တမ်းအဆုံးသတ်ဖြစ်ရမယ်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အဆိုပြုထားသည့်ဥပဒေအသစ်အရသင်အဆုံးသတ်လိုသည်မှာဤအတွေ့အကြုံသည်အကန့်အသတ်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
3.0.0.0.1 Gerd Altman, Mitch Wright နှင့် Kalhh တို့၏ပုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အဆုံးမဲ့စာလိပ်” ၏အဆုံးအကြောင်းပြောရုံသာမကဘဲ ဗီဒီယို autoplay ကိုလည်းကန့်သတ်လိမ့်မည် ဖွင့်နိုင်သည့်ဗီဒီယိုအကန့်အသတ်ရှိလိမ့်မည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် "SMART" ဥပဒေ (လူမှုမီဒီယာစွဲခြင်းလျှော့ချရေးနည်းပညာ) စာမကျြနှာမြားနှငျ့ Youtube ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်လူသိများဗီဒီယိုများ၏အလိုအလျှောက်မျိုးပွါးအတွက်အဆုံးမဲ့ scrolling မတားမြစ်ဖို့ရှာကြံသောတဦးတည်း။
ဤနည်းလမ်းများ သူတို့ကတကယ်ကိုစွဲလမ်းနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမော်ဒယ်ဖြစ်ကြသည် အသုံးပြုသူသည်ကန့်သတ်ချက်မသတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်သူ့ကိုအမြဲတမ်းတွေ့မြင်စရာတစ်ခုခုရှိသည်ဟုခံစားရစေကာ၊ Facebook စာမျက်နှာများမှအဆက်အသွယ်များ၊ hashtags သို့မဟုတ်သတင်းများ၏ကျန်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုသိရန် timeline (သို့) နံရံကိုဆက်ကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီစွဲလမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသုံးစွဲသူများကို၎င်းအချိန်ကာလသို့မဟုတ်နံရံနဲ့ချိတ်ဆက်စေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်ကွက်တွေပါ။ ဥပဒေကြမ်းအသစ်ကိုတင်သွင်းသူအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟော့လီ၏ပြောင်းရွှေ့မှုသည်ဖြတ်သန်းသွားလျှင်၎င်းကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ, Facebook နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အကြီးစားကုမ္ပဏီများအဖို့အားလုံးကိုလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အသုံးပြုသူကခွင့်ပြုချက်မပေးသေးသော်လည်း၊ အဆုံးမဲ့စာလိပ်နှင့်ဗီဒီယိုများအလိုအလျောက်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
Netflix ၏ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ကြစို့။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရွေးစရာကိုမပိတ်ပါက၊ ဖြစ်စဉ်များကိုအဆုံးမဲ့ကစားနိုင်သည်။ ငါတို့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ဥပမာကိုကြည့်ကြရအောင် (ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ရပ်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးသွားသောအခါစားပွဲထိုးသည်ငွေဟင်းတစ်ခွက်နှင့်အခြားစားဖွယ်စားစရာများနှင့်အတူလာနေသည်။ ဒီမှာ, ကံကောင်းတာက, ငါတို့အစာအိမ်၏စွမ်းရည်များအတွက်ကန့်သတ်ရှိသည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် န့်အသတ်မဲ့ Netflix ဟာဖြစ်စဉ်များ နေသမျှကာလပတ်လုံးငါတို့အိပ်မက်ကျော်ရသကဲ့သို့, ငါတို့သည်အဆုံးမရှိခဲ့ပါသကဲ့သို့ငါတို့စီးရီးတစ်ခုလုံးကိုမျိုချနိုင်သည်။ ထိုအသေချာကျွန်တော်တို့ကိုဖတျရှုသူမြား၏အခြို့သောကြောင့်ဖြစ် ငါတို့ဆိုလိုသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏.
ငါတို့ရှိသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သုခချမ်းသာများအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ Que သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Android မှာ app တစ်ခုစီနဲ့အတူနေရတဲ့အချိန်ကိုပြောပြတယ် နှင့် iOS ကိုအပေါ်။ အချိန်ကိုပင်ကန့်သတ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်၊ လူမှုကွန်ယက်အတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ဤဥပဒေသစ်တွင်သုံးစွဲသူများအားညွှန်ပြရန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်စာရင်းပေးရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုကန့်သတ်ထားရမည်။
ဒါဟာအစီအမံများထားပြီရှင်းပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ချက်တွေချဖို့တစ်ခုခုလုပ်ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့လွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်တယ်၊သို့သော်မည်သည့်လမ်းအတွက်ကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားသောဤလူမှုကွန်ယက်ကြသနည်း အရာအားလုံးသည်အသုံးပြုသူဘက်မှကျဆင်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ချမှတ်ထားသောအရာများသည်မလွယ်ကူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့ scrolling လုပ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းအတွက်ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုသည်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ဒီတော့ တကယ့်အဖြစ်မှန်ဖြစ်လာပြီးမျက်နှာသာပေးမဲပေးခြင်းကိုခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကလနဲ့အချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။
ထိုအရပ်မှအတည်ပြုသည်အထိ သူတို့အားကန့်သတ်ထားရန်သူတို့အားလူမှုကွန်ယက်မှအချိန်ပေးပါ နှင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်သူတို့၏လူမှုကွန်ယက်တွင်အဆုံးမဲ့စာလိပ်ကိုဝင်ရောက်ရန်မတူညီသောခွင့်ပြုချက်များကိုလက်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။
အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ပါတယ် လှည့်ကွက်အခြေအနေကိုရန်အသုံးပြုကြသည်သောသူတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစွဲလမ်းစေသည့် freemium ဂိမ်းများရှိလုယက်သေတ္တာများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့၎င်း၏အသုံးပြုမှုပြောင်းလဲသွားသည်။ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင်သူတို့အလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်.
Gerd Altman, Mitch Wright နှင့် Kalhh တို့၏ပုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အဆုံးမဲ့ scrolling လုပ်ခြင်းနှင့် autoplay သေဆုံးနိုင်သည်
Honor 20 ကိုဤဈေးကွက်တွင် Huawei Nova 5T အမည်ဖြင့်ပြန်လည်မွေးဖွားမည်
Vivo Z5 တွင် Snapdragon 712၊ သုံးဆကင်မရာနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်